Sonos Roam, nyocha na ọnụahịa na atụmatụ | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Hernandez | 06/04/2021 15:00 | General, Nyocha
Enwere ọtụtụ ndị ọzọ na-ada ụda dị iche iche na-abịa, ọkachasị mgbe anyị na-ekwu maka ịgagharị, ọ nweghị ihe na-ewute ya ịgbada na ọdọ mmiri ma ọ bụ soro onye ọkà okwu nwere ọgụgụ isi soro anyị mee achịcha ma jiri ya mee ihe n'ehihie anyị dịka kwere omume. Sonos kwuru ihe ịga nke ọma nke Move ma chọọ ime ka ọ pere mpe ma maa mma.
Chọpụta anyị niile na atụmatụ ya na ihe kpatara Sonos ji ekwupụta ocheeze nke ndị na-ekwu okwu obere.
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ oge ndị ọzọ, anyị kpebiri iso vidiyo a na channelụ anyị - YouTube nke ị ga-enwe ike ịhụ unboxing zuru ezu, ntọlite ​​usoro na ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ dị mma dị ka ule ụda. Anyị na-akwado ka ị gafere ọwa anyị ma were ohere isonyere obodo Actualidad Gadget, naanị mgbe ahụ ka anyị ga-aga n'ihu na-ewetara gị ọdịnaya kachasị mma ma nyere gị aka na mkpebi gị. Cheta na igbe nkọwa nwere ike ijide ajụjụ gị niile, egbula oge iji ya. Ọ masịrị gị? Nwere ike ịzụta Sonos Roam na EGO.
1 Akụrụngwa na imewe: Mere na Sonos
3 Akpaka TruePlay na Sonos Gbanwee
4 Nnwere onwe na nke ọdịyo
Akụrụngwa na imewe: Mere na Sonos
Firmlọ ọrụ North America nwere ike ịmepụta ngwaọrụ na njirimara nke ya, ọ nọkwa na-eme ya ọtụtụ afọ. N'okwu a, Sonos Roam na-echetara anyị ngwaahịa ngwaahịa ọzọ, Sonos Arc. na anyị enyochaala n'oge na-adịbeghị anya. Ma na ọ bụ na-eme ihe n'eziokwu, ọ bụ dị ka obere oyiri nke a mara mma nke ukwuu na na ọtụtụ otito e nyeworo ụlọ ọrụ ahụ. Ọ nwere a pụtara kọmpat size na ika onwe ya ihe, na a pụrụ iche ahu na kpamkpam Bibie naịlọn na-enye ukwuu na-eguzogide. Anyị họọrọ ọzọ maka agba abụọ, ọcha na oji na mmecha matte.
Akụkụ: 168 × 62 × 60 mm
Ibu ibu: 460 grams
O doro anya na ọ bụghị ngwaọrụ ọkụ, mana ọ bụ na ọ dịghị onye na-asọpụrụ onwe ya na-ekwu okwu ga-enwe obere ọkụ, na nke a nke ngwaahịa dị oke ọkụ na-apụtakarị adịghị mma ọdịyo. Ọ naghị eme na Sonos Roam, nke gunyere asambodo IP67, ọ bụ ihe na-adịghị mmiri, Já na-eguzogide ọgwụ ma nwee ike mikpuo n'ime mmiri ruo otu omimi ruo ihe dị ka nkeji 30 dabere na akara ahụ. Anyị enyochabeghị usoro ndị a maka ebumnuche doro anya, mana opekata mpe Sonos Move kwadoro ya.
Dị ka ọ na-eme n’oge ndị ọzọ, Sonos weputara ngwa ahịa emepụtara nke ọma ka ejiri ya rụọ ọrụ - Wifi, ya mere na ọ na-agụnye a netwọk kaadị dakọtara na ihe ọ bụla rawụta 802.11 b / g / n / ac 2,4 ma ọ bụ 5 GHz na ike igwu egwu na-ejighi eriri. Nke a na-adọrọ mmasị na dakọtara na netwọkụ 5 GHz, anyị maara na ọ bụghị ọtụtụ ndị ọkà okwu dakọtara, na nke a Sonos Roam ọ naghị efu. Agbanyeghị, anyị ekwesịghị ichefu na Sonos bụ obere kọmpụta dị ka ọdịdị nke ọkà okwu, ọ na-ezo n'ime obi ya a 1,4 GHz quad-isi CPU na A-53 ije nke na-eji ebe nchekwa 1GB SDRAM na 4GB NV.
Ndabere Google Home
Amazon Alexa ndakọrịta
Ndakọrịta Apple HomeKit
Ihe a niile na-eme ka Sonos na-akpagharị otu nọọrọ onwe ya na ngwaọrụ nke nwere n'aka Bluetooth 5.0 maka oge ndị ahụ na-akpọga anyị ebe dị anya, na maka ihe Sonos Roam a mere nke ọma. Ewezuga nke a, anyị ga-enwekwa Apple airplay 2 nke na-eme ka o kwekọọ na ngwaọrụ nke ụlọ ọrụ Cupertino yana Apple HomeKit mgbe ọ na-abịa ịmepụta ọtụtụ ihe omume na ụzọ kachasị mfe. Ihe a niile na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ Spotify Jikọọ, Apple Music, Deezer, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Akpaka TruePlay na Sonos Gbanwee
Ihe mgbakwunye Sonos Roam bara abụghị naanị ihe anyị kwuru na mbụ, ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ihe na-emegiderịta onwe ya n'ihi na ọ bụ Sonos dị ọnụ ala karịa n'ahịa, anyị na-ahụ sọftụwia abụọ na ngwaike nke Sonos na-etinyebeghị na ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi ya. . Anyị na-amalite na Sonos gbanwee: Mgbe ejikọrọ na Wi-Fi na play / kwusi button na Roam na-enwe ma jide, ọkà okwu ga-egosi ndị ọzọ Sonos ọkà okwu na netwọk gị ka emit ultrasonic ugboro ụda. A ga-ebufe egwu site na Sonos Roam na ọkà okwu kacha nso na obere oge.
Ugbu a, anyị na-ekwu maka akpaghị aka TruePlayỌtụtụ n'ime unu maara na TruePlay bụ usoro nyocha gburugburu ebe obibi Sonos nke na-enye anyị ohere inweta ụda kachasị mma maka oge ọ bụla. Ugbu a, anyị nwere ike ịgbalite ọrụ akpaka na-emesi anyị obi ike na Sonos TruePlay na-arụ ọrụ mgbe niile iji nye anyị ọdịyo kachasị mma ọbụlagodi mgbe ejikọrọ anyị site na Bluetooth, ihe na-enweghị atụ n'oge Sonos Roam.
Nnwere onwe na nke ọdịyo
Anyi na agaba ugbua, enweghị nkọwa na mAh anyị nwere ọdụdụ USB-C 15W (nkwụnye adịghị etinye) na wireless Nchaji nkwado Qi, nke chaja anyị ga-azụta iche iche maka euro 49. Sonos na-ekwe anyị nkwa oge elekere 10, nke ule anyị eruola ihe dịka ọ bụrụhaala na anyị nwere onye enyemaka olu kwụsịrị ma olu karịrị 70%. Iji kwụọ ụgwọ ya, anyị ga-ewe ihe karịrị otu elekere site na ọdụ USB-C, anyị enwebeghị ike ịnwale chaja Qi.
Dual Klas H Digital ampilifaya
Banyere ụda dị mma, Ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere ngwaahịa ndị ọzọ na oke ya dịka Ultimate Ears Boom 3 ma ọ bụ ọkà okwu JBL anyị na-ahụ ngwaahịa dị oke mma. Ee OK anyị nwere ụfọdụ mkpọtụ karịa 85%, O yiri ka ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere n'ihi nha ngwaahịa ahụ, n'otu ụzọ ahụ àgwà ya dị oke elu, a na-egosipụta ala ala karịsịa. Idem ama akpa mi aban̄a akwa odudu n̄kpọ emi, nsio nsio ukwakutom esie. Ihe a niile na - eme ya ka ọ bụrụ onye na - ekwu okwu kachasị ike na ọnụ ahịa kacha elu na for 179., na ihe ijuanya anaghị akwado ọnụahịa karịrị akarị na asọmpi ahụ.
Ihe na: 6 April 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 3 April 2021
Ahụtụbeghị njikọta na kọmpat kọmpat
Sonos ụda dị mma na ike
Spotify Jikọọ na ike ndị ọzọ nke Sonos S2
Alexa, Google Home, na airplay 2 ndakọrịta
Ibu ibu karịrị anyị
Qi chaja etinyeghị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Sonos Roam, obere ma na-eme ihe ike [Nyocha]
Egwuregwu chess kacha mma maka PC